Shina: Mikasa Hitarika Ny Sehatra Fitoraham-Bilaogy Bitika ny Antoko Kaominista Sinoa · Global Voices teny Malagasy
Shina: Mikasa Hitarika Ny Sehatra Fitoraham-Bilaogy Bitika ny Antoko Kaominista Sinoa
Voadika ny 12 Febroary 2012 6:51 GMT
Any Shina, eo ambany fiahian'ny Antoko Kaominista Sinoa (CCP) mivantana avokoa ireo fitaovana media mahazatra rehetra. Misy mpitan-tsoratry ny CCP dia napetraka isaky ny fikambanana media mba hanara-maso ny votoaty sy hanome ny zotra arahana ho an'ireo mpamoaka sy mpitatitra momba ny zavatra mila asongadina sy sivanina. Misy fandaminana tahaka izay ihany koa mety hapetraka any amin'ny fandrindràna ireo sehatry ny fitoraham-bilaogy bitika tahaka ny Sina sy ny Tencents Weibo, ny 6 Jona 2012 araka ny tatitry ny United Daily News [zh].
Milaza ity tatitra ity, taorian'ny Taom-baovao Sinoa araka ny Volana, fa namoaka fanamarihana ho an'ireo vahavahadin'ny Weibo maro toy ny Sina, Tencents, NetEase, Sohu sns… fa tsy ela taorian'ny fametrahana ny fitahirizana ny tena anarana ny sehatra mikarakara ny fampielezan-kevitry ny CCP dia hametraka sampana iray ao anatin'ireo vavahady ireo hanaraha-maso ny fandrindrana ny votoaty havoaka. Azon'ny sampan'ny antoko antoka fa ho voaraka tsara ny fametrahana ireo baiko avy any amin'ny sehatra mikarakara ny fampielezan-kevitra sy ny biraom-panjakana miandraikitra ny fampahalalam-baovao. Misy vola manokana hatokana ho an'ny fanaraha-maso ny sehatry ny fitoraham-bilaogy bitika.
Nisy loharano iray nilaza tamin'ny United Daily News fa tamin'ny fihetsehan'ny Weibo nandritra ilay lozam-pifamoivoizana niseho tamina fiarandalamby tany Wenzhou, nanaitra ny CCP ny hetsi-panoherana mikasika ny indostria mpamokatra PX simika any Dalian sy ny fikomiana tany Wukan. Ny anjara asan'ny ekipan'ny CCP any amin'ny vavahadin'ny Weibo dia ny manapa-kevitra malaky tsy misy hatak'andro amin'ny fanivanana ireo votoaty havoaka. Miaraka amin'ny fametrahana io fitahirizana ny anarana tena izy io, hisintona ny loharanom-baovao ny sampan-draharahan'ny polisy ary hanao hetsika famoretana. Amin'ny raharaha maika, hanery ireo sehatra hikatona ny sampan'ny CCP, hoy ilay tatitra.